OPPO F19 | OPPO မြန်မာ
OPPO F19 အကြောင်း တစေ့တစောင်း
ကြည့်ရှုရအဆင်ပြေခြင်း၊ နစ်မျောအောင် ဖမ်းစားနိုင်ခြင်း
အရာရာရှေ့ဆက်ဖို့အတွက် လုံလောက်သော နေရာများစွာ
ဘဝရဲ့ပုံရိပ်အား အကန့်အသတ်မဲ့ ပြသနိုင်ခြင်း
နေ့စဉ်လူနေမှုဘဝအတွင်း ဖုန်းဘက်ထရီအားကုန်ခြင်းကြောင့် စိတ်အနှောင့်အယှက်ဖြစ်စရာ မလိုတော့ပါ။ 5000mAh¹ ဘက်ထရီက သင့်တနေ့တာလုံးအတွက် လုံလောက်သော ဘက်ထရီကို ပေးစွမ်းပါလိမ့်မည်။ အကယ်၍ အရှိန်မြှင့်တင်ရန်လိုအပ်ပါက 33W အမြန်အားသွင်းစနစ်က မိနစ် ၃၀² အတွင်း ဖုန်းအား ၅၄% ရရှိအောင် ဆောင်ရွက်ပေးပါလိမ့်မည်။ အားအလွန်အကျွံသွင်းခြင်းမှ ကင်းဝေးစေရန် OPPO F19 တွင် AI နည်းပညာသုံး ညအချိန်အားသွင်းခြင်းစနစ်က အိပ်ချိန်အလေ့အထကိုလိုက်၍ ဘက်ထရီအား ၈၀% ရောက်ရှိချိန်တွင် အားသွင်းခြင်းကို ခေတ္တရပ်တန့်ကာ မနိုးထခင်အချိန်အတွင်းမှာပင် ဘက်ထရီကို ၁၀၀% ရရှိအောင် အားသွင်းပေးပါသည်။
ပေါ့ပါးသည့်အသွင်နှင့် သွယ်လျသော 3D အခုံးကိုယ်ထည်က အမြင်တွင်သာမက ကိုင်တွယ်အသုံးပြုရ အထူးလွယ်ကူမှုရှိပါသည်။
ရေခဲပြင်ကဲ့သို့ အပြာရောင်ရောင်စဉ်တန်းများ၏အလှကို ခံစားကြည့်လိုက်ပါ
ခေတ်မှီဆန်းကြယ်သော အမဲရောင်ဒီဇိုင်းဖြင့် အများ၏အမြင်ကို ဖမ်းစားနိုင်ပါပြီ။
ကင်မရာအပေါက်ဝိုင်းငယ်ပါဝင်သော AMOLED FHD+ ရုပ်ထင်မှန်သားတွင် မျက်နှာပြင်နှင့် ကိုယ်ထည်အချိုးကို လက်ရာမြောက် ဖွဲ့စည်းတည်ဆောက်ပေးထားသောကြောင့် ကောင်းမွန်စွာ စီးမျောခံစားနိုင်သော အတွေ့အကြုံကို ပေးစွမ်းနိုင်မည် ဖြစ်ပါသည်။ OPPO F19 က မျက်ဝန်းများအား ကာကွယ်ပေးနိုင်စေရန်ဖုန်းမျက်နှာပြင်အား အဆက်မပြတ် ချိန်ညှိပေးနိုင်သောကြောင့် မနက်ခင်းမှညနေမိုးချုပ်ချိန်ထိ မျက်ဝန်းများအား အကောင်းဆုံးစောင့်ရှောက်ကာကွယ်ပေးနိုင်မည်ဖြစ်ပါသည်။
90.8% မျက်နှာပြင်နှင့် ကိုယ်ထည်အချိုး
2400 X 1080 ရုပ်ထွက်ကောင်းမွန်မှု
409 PPI ပစ်ဇယ်သိပ်သည်းဆ
600nits အမြင့်ဆုံး အလင်း
လက်ဖျားလေးဖြင့် ထိတွေ့ရုံနှင့် အံ့မခန်းဖွယ် စွမ်းဆောင်ရည်ကို မြင်တွေ့နိုင်မည်
ခေတ်မီနည်းပညာကို အသုံးပြုထားသော In-Display လက်ဗွေအသုံးပြု လော့ခ်ဖြည်စနစ်တွင် လက်ဖျားနှင့်ထိတွေ့ရုံမျှဖြင့် သင့်လက်ချောင်းပေါ်ရှိ လက်ဗွေရာကို မှန်ကန်တိကျမှုစွာ အလျင်အမြန်ဖတ်ယူ၍ ဖုန်းလော့ခ်ဖြည်ပေးနိုင်ပါသည်။
မြင်တွေ့ရသည်နှင့်ထပ်တူ ဖမ်းယူရိုက်ကူး မှတ်တမ်းတင်နိုင်ခြင်း
ကမ္ဘာကြီးအား ရသမြောက်စွာ အသေးစိတ် တွေ့မြင်နိုင်ခြင်း
ကမ္ဘာ့အံ့ဖွယ်ရာများအား တိကျရှင်းလင်းပြတ်သားစွာ မှတ်တမ်းတင် ရိုက်ကူးခြင်း
ဆန်းပြားသည့် အလှဓါတ်ပုံများအား အလွယ်တကူ ရိုက်ကူးရယူနိုင်ခြင်း
အံ့သြမှင်သက်ဖွယ် ရှေ့ကြည်နောက်ဝါး လုပ်ဆောင်ချက်များ ပါဝင်သော ထင်ရှားပေါ်လွင်သည့် အလှဓါတ်ပုံရိုက်ချက်များ
အသေးငယ်ဆုံးအစိတ်အပိုင်းများအထိ အသေးစိတ်ကျကျ အလှပဆုံးဖြစ်အောင် ရိုက်ကူးပေးနိုင်ပြီး မတူကွဲပြားသော အသွင်သစ်ဖြင့် တွေ့မြင်နိုင်မည်ဖြစ်သည်။
AI နည်းပညာသုံး အလှပြုပြင်ပေးသည့် Selfie Camera
အလှစစ်ကို ဂုဏ်ယူစွာဖြင့် ထုတ်ဖော်နိုင်ခြင်း
အလှစစ်ကို ထုတ်ဖော်နိုင်ရန် စိတ်ကြိုက်ချိန်ညှိနိုင်သော AI နည်းပညာသုံး အလှပြုပြင်ခြင်း နည်းစနစ်ကို အသုံးပြုနိုင်ပါသည်။
နှေးကွေးစွာ ချိန်ညှိထားခြင်းများအား အဆုံးသတ်ခြင်း
အမြဲကောင်းမွန်ပြီး မြန်ဆန်မှုရှိသော ဖုန်းတလုံးကို လက်ဝယ်ပိုင်ဆိုင် သိမ်းဆည်းထားလိုက်ပါ။ အဆုံးအစမရှိသော မှတ်သားရန်များနှင့် ချောမွေ့ကောင်းမွန်သော လုပ်ဆောင်ချက်များအတွက် 6GB RAM နှင့် 128GB ROM ကို ထည့်သွင်းပေးထားပါသည်။
ဂိမ်းမှာ အနိုင်ရဖို့အတွက် စက္ကန့်တိုင်းအရေးကြီးပါသည်။ ဂိမ်းကစားရာတွင် Game Focus Mode သည် အခြားကိစ္စရပ်များအား ခေတ္တဆိုင်းငံ့ထားပေးနိုင်ပြီး ဂိမ်းကစားမှုအပေါ်တွင် အာရုံအပြည့်ထားနိုင်စေရန် အခြားသော အသိပေးစာတိုများအား နှောင့်ယှက်မှုအနည်းဆုံးပုံစံဖြစ်အောင် စာတမ်းထိုးပုံစံဖြင့် ပြသပေးပါသည်။
App များအား သော့ပိတ်ခြင်း
အရေးကြီးသော အချက်အလက်များအား လုံခြုံအောင် သိမ်းဆည်းထားပေးခြင်းဖြင့် ဖုန်းအား ယုံကြည့်ချက်ရှိရှိဖြင့် တပါးသူအား ပေးသုံးနိုင်ပါပြီ။
ကိုယ်ပိုင်အချက်အလက်များအား Cloud ဖြင့် ချိတ်ဆက်သိမ်းဆည်းခြင်း
ကိုယ်ပိုင်အချက်အလက်များအား အခြားလုံခြုံစိတ်ချရသော မည်သည့်စက်ပစ္စည်းဖြင့်မဆို လှမ်းယူကြည့်ရှုနိုင်ပြီး အခြားမဆိုင်သူများမှ ဝင်ရောက်ကြည့်ရှုခြင်းမှ ကင်းဝေးစေပါမည်။
အရေးပေါ်ကိစ္စရပ်များတွင် အသုံးပြုမှုအတွက် ပါဝါခလုတ်အား အကြိမ်များစွာနှိပ်ပေးခြင်းဖြင့် လွယ်ကူရိုးရှင်းစွာ လုပ်ဆောင်နိုင်မည်ဖြစ်သည်။
1. 5000mAh သည် ယေဘုယျပမာဏဖြစ်သည်။ အနိမ့်ဆုံးပမာဏမှာ 4880mAh ဖြစ်သည်။
2. အချက်အလက်များအား စမ်းသပ်ခန်းအတွင်း စစ်ဆေးချက်များမှ ရယူထားခြင်းဖြစ်သည်။ အမှန်တကယ် အားသွင်းနိုင်သောအချိန်သည် အနည်းငယ် ကွဲလွဲမှုရှိနိုင်ပါသည်။
3. မျက်နှာပြင်အရွယ်အစားအား ထောင့်ဖြတ်တိုင်းတာခြင်းဖြစ်သည်။ OPPO F19 ၏ မျက်နှာပြင်အရွယ်အစားသည် ထောင့်မှန်စတုဂံအပြည့် အရွယ်အစားဖြင့် 16.34cm ဖြစ်သည်။ အမှန်တကယ်ရှုမြင်နိုင်သော ဧရိယာသည် ဘေးထောင့်ဝိုင်းအနေအထားများကြောင့် အနည်းငယ်လျော့နည်းနိုင်ပါသည်။
4. ကုန်ပစ္စည်းဓါတ်ပုံများသည် ကိုးကားရန်အတွက်သာဖြစ်သည်။ အမှန်တကယ်ထွက်ရှိမည့် ကုန်ပစ္စည်း၏ အသေးစိတ်ဖော်ပြချက်များနှင့် ရှင်းလင်းချက်များသည် ကုန်ပစ္စည်းတင်သွင်းသူ အပြောင်းအလဲကြောင့် အနည်းငယ် ကွဲပြားမှုရှိနိုင်ပါသည်။ အမှန်တကယ် ထွက်ရှိလာမည့် ကုန်ပစ္စည်းကိုသာ ကိုးကားရန်ဖြစ်သည်။
5. ကုန်ပစ္စည်းနှင့်သက်ဆိုင်သော အသေးစိတ်ဖော်ပြချက်ဆိုင်ရာ အချက်အလက်များအား OPPO ၏ နည်းပညာဆိုင်ရာ တိုင်းတာမှုများ၊ စမ်းသပ်ခန်းနှင့် ကုန်ပစ္စည်းတင်သွင်းသူများမှ စမ်းသပ်ထားသော အချက်အလက်များမှ ရယူဖော်ပြထားခြင်းဖြစ်သည်။ အမှန်တကယ်ထွက်ရှိလာမည့် ကုန်ပစ္စည်းအသေးစိတ်ဖော်ပြချက်များသည် စမ်းသပ်သော ဆော့ဝဲလ်၏ဗားရှင်း၊ စမ်းသပ်သည့် ပါတ်ဝန်းကျင်အခြေအနေနှင့် သက်ဆိုင်ရာဗားရှင်းများအပေါ်မှုတည်၍ အနည်းငယ် ပြောင်းလဲမှုရှိနိုင်ပါသည်။